<p><font color="#333333" face="Poppins"><span style="font-size: 12px;">အရေအသွေကောင်းမွန်ပြီး&nbsp;ဈေးတန်တဲ့ Plastic ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို Leolast မှာ စုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါသည်။</span></font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Poppins; font-size: 12px;">အိမ်သုံး လုပ်ငန်းသုံး plastic ခုံမျိုးမျိုးတို့ကို တစ်နေရာထည်းတွင် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်တာမို့ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အဆင်ပြေစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။</span><br></p>
35 ~ 42 Kyats
145 ~ 180 Kyats
7 ~ 80 Kyats
10 ~ 60 Kyats
Vertical Automatic Packing Machine (ထုပ်ပိုးစက်)
Including - JT-420 Automatic vertical packing machine. Multihead weigher,Platform Automatic Elevator,finished products conveyor.Application-Suitable for many kinds of measuring equipments, and package different kinds of products: such as puffy food, shrimp roll, peanut, popcorn, cormeal, seed and sugar etc. which shape is roll, slice and granule. JT-420 Packing Machine ထုတ်ပိုးစက်အပြင် JT-420F Vertical Automatic Powder Packing Machine , JT-420 vertical packing machine with volume cups device စသည့် ထုတ်ပိုးစက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်း ဈေးနှုန်းချိုသာယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ခင်ဗျာ။ Packing Machine များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Peace Brothers Company သို့ တိုက်ရိုက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။
Large format, small format vinyl printing Finishing &amp; Delivery
Sticker Printing Car Sticker for advertising Printing &amp; Installation Indoor Interior Design Sticker Printing &amp; Installation Glass Sticker Printing &amp; Installation Sticker on PP Board/ Sticker on all in one board Transparant sticker printing
Sticker on glass Cutting &amp; installation Printing &amp; installation
ကုန်ပစည်းကြော်ငြာလိုသောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဗွီနိုင်း၊ စတေကာ၊ ပုလဲစတေကာ၊ ရောင်ပြန်စတေကာ၊ ကားစတေကာ၊ photo pater၊ backlit film နှင့် Glass sticker အစရှိသည့်များကို အထူးဈေးနှုန်းသက်သာစွာနှင့် အရေအသွေးကောင်းမွန်စွာဖြင့် ထုတ်ပေးနေပါသည်။ အရေအတွက်များသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအတွက် တပေပတ်လည် ၉၀ကျပ်၊ မီးဖိ၊ ကွင်းဖေါက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း အခမဲ့ ပို့ပေးပါသည်။ (5000-sqft နှင့်အထက်) sqft 10000 နှင့်အထက်မှာပါက ဈေးနှုန်း ထပ်ညှိပေးပါမည်။ ဖုန်း : 09-795846339၊ 09-250359026
လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ထုပ်ပိုးသယ်ယူအိတ်အဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ Promotion Bag အဖြစ်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုရန် Recycle Bag (ပလပ်စတစ်အစားထိုးအိတ်) များလိုအပ်ပါက လှပသပ်ရပ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Recycle Bag များကို အရောင်စုံ၊ ဆိုဒ်စုံလင်စွာဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအမည်၊ လိုဂိုဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုလည်း အိတ်ပေါ်တွင် ဆေးသားခိုင်ခံ့လှပစွာဖြင့် ရိုက်နှိပ်ပေးပါသည်။